कुलमानले राम्रो आवरण भित्र नराम्रो काम त गर्नुभएको छैन सचेत हुनुपर्छ – महेश बस्नेत || सुनौलो नेपाल
कुलमानले राम्रो आवरण भित्र नराम्रो काम त गर्नुभएको छैन सचेत हुनुपर्छ – महेश बस्नेत
जेठ २२ काठमाण्डाै – केहि दिन अगाडी सार्वजनिक लेखा समितिमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ९ अर्व उठाउन नसकेको आरोप लागेपछि अहिले नयाँ तरंग सिर्जना भएको छ। सत्तारुढ दल नेकपाका सांसद अमनलाल मोदीले ९ अर्ब भ्रष्टाचारको आरोप कुलमानलाई लगाएपछि यस बिषयले व्यापकता पाएको छ। यसैबीच पुर्बमंत्री तथा सत्तारुढ दल नेकपाका सांसद महेश बस्नेतले विद्युत् प्राधिकरणको नौ अर्ब बक्यौताबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र लेखा समितिले छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै बस्नेतले बक्यौता र भारतबाट खरिद गरिएको विद्युत् उपभोगबारे छानबिन गर्न माग गरेका हुन्।
यसै बिषयमा सांसद बस्नेतसंग सुनौलो नेपालका लागि मोहराज पौडेलले गरेको कुराकानीको केही सम्पादित शब्दहरुको अंश र पुरा भिडियो तल हेर्न सक्नुहुनेछ।
तपाइँले हिजो संसदमा बिधुत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ्गको बिषयमा जुन कुरा उठाउनुभयो त्यसमा के कुलमान दोषी हुनुहुन्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?
मैले कुलमान घिसिङ्गलाई दोष लगाउन खोजेको होइन। उहाले धेरै राम्रा काम गर्नुभएको छ जसको म खुलेर प्रसंसा गरेको छु। म उहाँको प्रसंसक नै हूँ। तर यसो भन्दैमा उहाँले गरेका सबै काम राम्रा नै हुन्छन भन्ने त हुदैन नि। मैले भन्न खोजेको कुरा भनेको माननीय अमनलाल मोदीले उठाएका बिषय गम्भीर छन् र ति बिषयमा सत्यतथ्य छानबिन गरिनुपर्छ भन्ने हो।
बक्यौता उठाउने कुरामा राज्यको अथवा तपाइँहरु सांसदको दबाबले पनि त कठिनाई भएको हुन्छ नि ?
होइन जुन बेरुजु देखिएको छ त्यसको छानबिन गर्दा त यी तपाइँले भनेका जुन कुरा छन ति पनि त बाहिर आउछन नि। छानबिन गर्ने भनेको कुलमानलाई मात्र व्यक्तिगत रुपमा गर्ने होइन, सबै बिषयमा छानबिन गर्दा कहाँकहाँ र कसकसको कमजोरी छ भन्ने कुरा त सतहमा आउछ नि।
लोकप्रिय काम गर्दै गरेका असल प्रशासकलाई यसरी प्रहार गर्दा उहाँको मनोबलमा असर गरि राज्यलाई नै क्षति हुदैन ?
राम्रा काम गर्ने मान्छेको मनोबल सधैँ उच्च हुनुपर्छ। काम गर्दै जाँदा केहि अफ्ठ्याराहरु आउछन नै। ति समस्याहरु समाधान गर्दै अगाडी बढ्ने हो। एउटा असल प्रशासकले आफ्नो कामबाट पुस्टि गर्ने हो कि म सहि छु। त्यसैले छानबिन गरेर को सहि को गलत पत्ता लगाउनुपर्छ। तर राम्रो कामको आवरणमा कतै नराम्रो काम त भएको छैन हामी सचेत हुनुपर्छ।
कुलमान घिसिङ्गको दम्भ बढेको भनेर पनि सांसद अमनलाल मोदीले भन्नुभएको छ यसमा के भन्नुहुन्छ ?
म उहालाई राम्रोसंग चिन्दा पनि चिन्दिन। कहिलेकाहिँ अक्कलझुक्कल भेट हुने मात्र हो। मैले कुलमानजी लाई उहाँ दम्भी घमण्डी भ्रस्ट भन्दा पनि भन्दिन त्यो भन्ने अधिकार पनि म मा छैन। तर कहिलेकाहिँ राम्रो आवरणभित्र पनि नराम्रा कामहरु भैरहेका हुन पनि सक्छन त्यसमा हामि सचेत हुनुपर्छ र यसमा छानबिन हुनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो।
हेर्नुहोस बस्नेतसंग सुनौलो नेपालका लागी गरीएको सो कुराकानी पूर्ण अंश
बुध, जेष्ठ २२, २०७६ मा प्रकाशित सुनौलो नेपाल अनलाइनद्वारा संचालित सुनौलो नेपाल टी. भीसंग प्रत्यक्ष जोडिन यहाँ क्लिक गर्नुहोस
कुलमानको चमत्कार घाटाको प्राधिकरण ७ अर्व नाफामा, बिजुली बेच्ने भारतलाई उल्टो ५० करोडको बिक्रि (भिडियो सहित)
सुबोध गौतम राजा राजेन्द्र र मन्जु एउटै स्टेजमा नेताहरु माथी कडा व्यग्य (भिडियो सहित)